अर्गाज्म अर्थात् यौन समागमका बखत महसुस हुने चरम सुखसँगै समयशून्यताको अनुभूति हुन्छ । मानिसले स्वयंलाई भुल्दछ र अगाध आनन्दसागरमा विलिन हुन्छ । तान्त्रिक पद्धतिको ज्ञान नभएका मानिसका निम्ति भने यो अनुभूति क्षणिक हुने हुँदा यसले धेरै महत्व राख्दैन ।
मौसम परिवर्तनसँगै सर्वसाधारणलाई लाग्ने रोग पनि फरक फरक हुन्छन् । गर्मी याममा झाडापखाला बढी मात्रामा देखिन्छ भने जाडो याममा रुघाखोकी । अहिलेको मौसम न जाडो छ, न त चर्को गर्मी नै । बच्चादेखि बूढासम्म नै मौसम परिवर्तनको यस संघारमा बिरामी हुने गर्छन् ।
यौन रोगको संक्रमण
यौनरोगीहरुमध्ये धेरै पहिले पहिचान गरिएको सिफिलिस एउटा प्रमुख यौन रोग हो । यस रोगलाई नेपालमा भिरंगीको नामले चिनिन्छ । यो रोग टिपोनेमा पालिडियम भन्ने जीवाणुले गराउँछ । यो जीवाणुको संक्रमण भएपछि लक्षणहरु देखिन लामो समय लाग्न सक्छ । साधारणतः ९ देखि ९० दिन यसको संक्रमण काल हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसका लक्षण नदेखिन सक्छन् तर थाहा हुँदानहुँदै यसको जीवाणुहरुले शरीरका विभिन्न अंगमा असर गर्न सक्छ । यो रोग लाग्दा सुरुमा विमिरा वा खटिराजस्तो देखिन्छ वा एउटा दुई वटा नदुख्ने घाउको रुपमा देखा पर्न सक्छ ।
कतिपय युवकहरु स्वप्नदोष हुँदा वीर्यपतन भएको घटनाले भएको घटनाले चिन्तित बनेका हुन्छन् । किनभने उनीहरुलाई यो शरीरको स्वभाव र सहज प्रक्रिया हो भन्ने बारेमा कसैले भनेको हुँदैन । न त स्कुलमा यस्तो पाठ्यक्रम छ न आमाबाबुले छोरा छोरीलाई यौन शिक्षा आवश्यक सम्झन्छन् ।
यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन । केही अपवादबाहेक सबै मानिस यौनकार्यमा सहभागी हुन्छन् । कसैले विवाहपछि सेक्स गर्छन् भने कसैले विवाहअघि नै गर्छन् ।
तपाईंको शरीरले जति वीर्य बनाउँछ, त्यस हिसाबले जीवनभर एउटै सेक्स पार्टनर हुनु उति राम्रो आइडिया पक्कै होइन । यसको सदुपयोग गर्ने हो भने त सेक्स पार्टनर बढीभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, होइन त ? त्यसैले त स्तनपायी र अन्य जन्तु समूहमा एउटै सेक्स पार्टनर विरलै हुन्छ । मानिसका बारेमा पनि यस्तै हुनुपर्ने हो तर वास्तवमा कैयौँ संस्कृतिहरुमा कैयौँ जीवनसाथी बनाउने र बहुविवाह गर्ने चलन छ ।
करिब ३० वर्षका एक मानिस कार्यालय जाने तयारी गर्दैथिए । उनले भान्छाकोठामा प्याज राख्ने ठाउँबाट खसेको ‘एक्लो’ प्याज देखे । त्यो प्याज उनले टिपे तर राख्ने ‘उचित’ ठाउँ भेटेनन् । जता राख्दा पनि अशोभनीय लागेपछि उनले त्यसलाई कोटको खल्तीमा राखे र कार्यालय गए ।
उमेर पुगेका किशोरकिशोरी, तरुणातरुणीका लागि विवाहपछिको पहिलो रात र पहिलो सम्भोगको कल्पना सुखद् र आशंकापूर्ण दुवै हुन्छ ।‘सुहागरात’ हिन्दीबाट नेपाली आयातीत शब्द हो । ‘मधुरात्रि’ चाहिँ अंग्रेजी शब्द ‘हनीमून’ को ठाडो अनुवाद हो ।
जति सुत्दा पनि निन्द्रा नपुगेजस्तो हुन्छ वा रात्रिमा निन्द्रा पर्दैन, खानपिन, शारीरिक अभ्यास, उपचार आदि गरे पनि शरीरको तौल परिवर्तन भएको छैन, बिनाकारण अचानक धेरै तौल घटेको वा बढेको छ, ज्यादै न्यून कोलेस्ट्रोल छ वा परिवारमा कसैलाई गलगाँड, अस्वाभाविक मोटोपन वा निको नहुने घाँटीको रोग छ भने तपाईंलाई थाइराइडको समस्या हुनसक्छ ।
कतै तपाईंलाई आँखाको डिल सुन्निने, चिलाउने र कचेरा लाग्ने तथा आँखा रातो हुने समस्या त देखिएको छैन ? यदि त्यसो हो भने चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुहोस् है ! नत्र समस्या झनै बढ्न सक्छ र सदाका लागि आँखाको ज्योति गुम्ने डर पनि हुन्छ ।
सेक्सका लागि अचानक मूड कसरी बनाउने ?
बुधबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस पटकको बर्षातले एक सय ११ जनाको देहान्त गराइसकेको छ । लगातारको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढीपहिरोले यत्तिका जन साथै अकल्पनीय धनको क्षति भइसकेको छ ।
श्रीस्वस्थानीको कथामा शिव ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीको प्रसंग आउँछ र त्यसमा ७० वर्षका वृद्धले सन्तान जन्माएको पढ्न पाइन्छ । यो कथा मात्र होइन । हामीले अपनाउने जीवनशैलीले हाम्रो यौन जीवन र यौनशक्ति निहित हुन्छ ।
यौन रोगीहरुमध्ये धेरै पहिले पहिचान गरिएको सिफिलिस एउटा प्रमुख यौन रोग हो । यस रोगलाई नेपालमा भिरंगीको नामले चिनिन्छ । यो रोग टिपोनेमा पालिडियम भन्ने जीवाणुले गराउँछ । यो जीवाणुको संक्रमण भएपछि लक्षणहरु देखिन लामो समय लाग्न सक्छ ।